Usoro nzuzu nke ire ahia laghachi na ego | Martech Zone
Fraịde, Machị 28, 2014 Fraịde, Machị 28, 2014 Douglas Karr
Ternyaahụ, emere m otu nnọkọ na Social Media Marketing World akpọrọ Etu esi agbanwe site na ndị na-eso ụzọ na-eweta nsonaazụ na Social Media. M na-abụkarị onye megidere ndụmọdụ a na-agbanye na ụlọ ọrụ a… na-adaberekarị na esemokwu ahụ. Ezi mbido bụ na azụmaahịa na-aga n'ihu na-achọ onye na-akwado ya na onye na-eso ụzọ na mgbasa ozi mmekọrịta - mana ha na-arụ ọrụ jọgburu onwe ya nke ịtụgharị ndị na-ege ntị ma ọ bụ obodo dị ịtụnanya.
N'ime oge ahụ, m gara ọbụna ịjụ ọtụtụ n'ime ROI mmesho na-ekwu na ebe a ma ọ bụrụ na ịlaghachi na ntinye ego maka mbọ mgbasa ozi gị. Otu ezigbo ndị enyi blọọgụ a bụ Eric T. Tung… Onye tweeted:
Agakwala @Nichole_Kellynnọkọ, mee ka mgbasa ozi mmekọrịta ROI bụ BS! @onyedikachi_ # SMMW14
Ọ bụ ihe ọchị karịsịa ebe ọ bụ na onye ọrụ ibe m a na-akwanyere ùgwù (na nna m karaoke), Nichole Kelly, nọ n'otu oge na-ekerịta oge ya: Dị weghachite ihe mgbochi na ịlele Social Media ROI. Doh!
Ọ bụghị na ekweghị m na enwere laghachi azụmaahịa - Ekwenyere m na enwere nnukwu nloghachi na itinye ego maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ezie, ekwenyere m na ọ dị mma karịa ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbu a kwenyere. Ihe bụ nsogbu bụ mmesho. E nwere ọtụtụ ụzọ nke mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-emetụta nloghachi na itinye ego:
Ntuziaka ozugbo - ndị mmadụ hụrụ ozi ahụ ma ha zụtara ya.
Mmetụta na-enweghị isi - ndi mmadu kesara ozi ma obu zoro mmadu aka na ndi mmadu ma ha zutara ya.
Attributiondị akara - ndị mmadụ na-ahụ ị n'ịntanetị ma hụ gị dị ka ikike na ụlọ ọrụ gị, na-eduga ha inyocha ngwaahịa na ọrụ gị.
Tụkwasị obi - ndị mmadụ soro gị n'ịntanetị, ị ga-enweta ntụkwasị obi ha, na-eduga ha ịzụta ngwaahịa na ọrụ gị.
Direct akpịrị dị mfe tụọ… ụfọdụ ezi mkpọsa nsuso na ị nwetara ya ala kutu aka. Nsogbu di enweghị mgbasa ozi mmekọrịta ROI abịa na ndị ọzọ. Ha anaghị eji nyocha mkpọsa gị mgbe niile - ma ọ bụ ha abata ma zụta na saịtị gị site na ntanetị ahịa ndị ọzọ n'ịntanetị.
Nchịkọta Google nwere ngwá ọrụ dị egwu a na-akpọ Multi-Channel Conversion Visualizer ebe ị nwere ike ịhụ ma ndị ọbịa gị jiri ọtụtụ ụzọ iji gaa na saịtị gị. Na nseta ihuenyo a dị n'okpuru - ị ga-ahụ ebe ahịrị na-aghọ blurry. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbanwe na saịtị a sitere na ndị mmadụ na-abanye na saịtị ahụ karịa otu ụzọ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ikwubi na ha enweghị ezigbo mmemme azụmaahịa email - itinye ezigbo ROI na ntinye aka na ntụgharị ọchụchọ agaghị ekwe omume n'ihi na ịnweghị ike ịbanye n'isi ndị ọbịa niile wee kpebie nke Ọwa bụ ego nke mere ka ha kpebie ịzụta.
M ga-edo na ọ bụghị nke, ọ bụ nguzozi nke ha niile. Ndị na-ere ahịa ga-amata otu ụzọ ha si emetụta nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị belata mbuso mgbasa ozi mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike inwe mmetụta na ntụgharị mgbanwe ọchụchọ gị! N'ihi gịnị? Maka na ndị mmadụ achọghị ịma ihe ngwaahịa na ọrụ gị bụ yabụ ha anaghị achọ gị. Ma ọ bụ na ha enweghị ntụkwasị obi, yabụ na ha na-achọ ndị asọmpi nke nwere mmekọrịta mmekọrịta ka mma ma soro ha gbanwee. Ma ọ bụ onye ọ bụla na-ekwu maka ndị asọmpi gị do nwee ọpụrụiche mmekọrịta gị na ndị ọzọ… nke na-eduga n'isiokwu ndị ọzọ gbasara asọmpi gị… nke na-eduga ha n'ọkwa dị mma.
Dị ka ndị ahịa, anyị chọrọ amụma nchịkọta ngwaọrụ nke ghotara mmetụta na mmekọrita nke mbọ anyị niile - na-enyere anyị aka ịghọta etu ha si enye ibe anyị nri na otu ha si arụ ọrụ. Ọ bụkwaghị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkekọrịta ọha mmadụ na ịlele nloghachi na mbọ ahụ na njiri aha, ọ bụ okwu nke ịnwale na ịhazigharị mbọ mgbasa ozi anyị na ilele mmetụta niile nke atụmatụ ahụ ga-esi na mbọ ahịa ahịa dijitalụ anyị niile.
Ọrụ anyị abụkwaghị ikpebi onye anyị ga - eji mee ihe… ọ bụ okwu gbasara itinye ego iji bulie mbọ niile anyị na - agba. Were anya gị dashboard dị ka bọọdụ na-ada ụda, na-ewelite na ala a na-akpọ oku ruo mgbe egwu mara mma. Nloghachi na ntinye ego maka mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike tụọ - mana eziokwu bụ karịa blur karịa ụfọdụ ndụmọdụ dị ebe ahụ.
Cheta na: Ị nwere ike zụta njem gafere na Social Media Marketing World maka obere ego nke ịga ma ị nwere ike ige ntị na nnọkọ m na ihe ngosi ndị ọzọ!
Tags: ọdịnaya ahịa roiemail ahịa nloghachi na egoozi emailire ere roiNwachukwuakwụ ụgwọ ọchụchọ roilaghachi azụmaahịachọọ ahịa roimgbasa ozi mgbasa ozi na-alaghachi na ntinye egoelekọta mmadụ media roi
Ah, alaeze m maka ezigbo ahia akpaaka ngwá ọrụ nwere ike soro dijitalụ ahụ asụsụ na aka n'ikuku ana enweta n'otutu-ọwa ahịa, na-eduga isi, wdg…. oh, chere. #Loqua.